shaambada birta lagu xidho | soosaaraha mashiinka kululaynta induction | xalalka kululaynta induction
qaadashada sham biraha
Qaboojinta Birta Dabaysha
Ujeeddo: Kuleylka kuleylka dhammaadka uumiga ah ee shamac biraha si ay u helaan boqollaal halkii ay dildilaaci lahaayeen / kala qaybinayaan marka uu ku dhuftey digaag.
Qalabka S-7 ee qiyaasta kala duwan ee dhinacyada kala duwan
Heerkulka 1400-1800 ºF (760-982) ºC
Joogitaanka 300 kHz
Qalabka DW-UHF-10KW, nidaamka kuleylinta induction, oo leh qalab kulayliye oo fog oo leh laba xaynood oo ku jira 1.5 μF oo ah wadarta 0.75 μF iyo saddex seddex qalfoof oo kala duwan oo loogu talagalay oo loogu talagalay gaar ahaan codsigan.
Geedi socodka Hal shan-leexasho iyo laba afarta wareeg ah oo xargaha goos goos ah ayaa loo isticmaalaa in lagu kululeeyo dhamaadka istaambuuga heerkulka loo baahan yahay. Laba qaybood oo cabbir ah ayaa lagu dhex ordi karaa mid kasta oo ka mid ah gariiradda, iyadoo la adeegsanayo isla mashiinnada isku meel marka laga reebo waqtiga wareegga. Qiimaha wareegga waxay kuxirantahay cabirka goos gooska. Cabirka laba jibbaaran 3/8 ″ (0.9525 cm) wuxuu leeyahay qiime ka hooseeya 10 sekan. Heerka cabirka dhexe, ½ ”- 1 ½” (1.27 - 3.81 cm) waa 30 ilaa 60 ilbiriqsi. Qeyb laba jibbaaran 1 ″ (2.54 cm) waxay qaadataa qiyaastii laba daqiiqo. Isku dheellitirku wuxuu saameyn ku yeelan karaa dhererka waqtiga wareegga ee loo baahan yahay. Waqtiyada kuleylka gaagaaban waxaa la isticmaali karaa koronto ballaaran.
Natiijooyinka / Faa'iidooyinka Kuleylka kuleylka kaliya ee aagga u baahan in la qaboojiyo waa mid waxtar leh oo lagu celin karo kuleylka oo leh shucaac.
Categories Technologies Tags qaadashada sham biraha, qashin koranto, xajinta siligga, qabashada induction, birta qashin qubka, tuubooyinka qaboojinta induction